Ngowama-2014/10/15 uMbutho waseTshayina wokuThengisa nokuThumela ngaphandle
I-China yokungenisa ngaphakathi kunye nokuThumela ngaphandle yenye yeemiboniso zokuqala inkampani yethu ethathe inxaxheba kuzo, kunye nesiqalo sedabi elikhulu. Abathengi kulo mboniso bagcine ubudlelwane bexesha elide bokusebenzisana nathi
2016/9/8 Umboniso wezeMpilo eAfrika
Inkampani yethu ithathe inxaxheba kwimiboniso yezempilo eAfrika kwaye igcina unxibelelwano olusondeleyo kunye nabathengi babathengi balapha. Okwangoku, sigcina intsebenziswano nabathengi abaninzi eAfrika. Iimveliso ezithunyelwa ngaphandle zimalunga nezigidi ezi-3 zeedola zaseMelika ngonyaka.
Inkampani yethu ithathe inxaxheba kwi-CMEF, izinto ezingaphezu kwe-100 zeemveliso zibonisiwe, kwaye zithandwa ngokupheleleyo ngabathengi, kwaye zinxibelelana nenani labathengi kwaye zithatha inxaxheba kwintsebenziswano.